eNasha : Articles Related to मूर्ख्याइँ in Weird & Interesting
Articles Related to मूर्ख्याइँ in Weird & Interesting
जर्मनीका एक रक्स्याहा व्यक्तिले घोडालाई बैंकमा पूँजी जम्मा गरेझैँ एक रातका लागि जमाइदिएको एपी समाचारले जनाएको छ ।...
अरुलाई मूर्ख बनाउँदा रमाऊनेले अरुलाई पर्ने मर्काबारे पनि केही सोच्ने हो कि ?...
स्वर्ग जाने बेलामा ड्रग्सको खेती !
७१ वर्षीया एक महिलालाई प्रहरीले आफ्नो बारीमा ड्रग्सको खेती लगाएको आरोपमा पक्राउ गरेको रोयर्टस समाचारले जनाएको छ । ...
कुटाकुट गर्न उक्साउने आमा
आमाहरुले आफ्ना सन्तानले नराम्रा कुरा नसिकून् नै भन्ने चाहन्छन् । तर अमेरिकाकी ४१ वर्षीया सोफिया इलम चाहिँ हालै आफ्नो सन्तानलाई ग्याङ फाइटका लागि उक्साएको आरोपमा पक्राउ परेकी छिन् । ...
एक तिहाई व्यक्तिहरु भूतमा विश्वास गर्छन्
कम आय हुनेहरु, गाउँ निवासी र तल्लो जातका व्यक्तिहरु चाहिँ बढी टुनामुना र बोक्सीजस्ता कुरामा विश्वास गरेको अध्ययनले देखाएको छ । ...
चीनका एक स्कूले ठिटाले ५० लाख युआन अर्थात् ६ लाख ८३ हजार डलर रकम बराबरको चिठ्ठा पाएपछि उनले स्कूललाई त्यागेका छन् । ...
३८ पटक फेल हुँदा पनि जाँच दिने तयारी
भारतका एक पेन्सनपट्टा कमाइसकेका व्यक्तिले १० कक्षामा ३८ वर्ष फेला हुँदा पनि जाँच दिने सुरमा लागेका छन् । ...
जर्मन रोमियोलाइ अपहरणको मुद्दा
जर्मनीका एक प्रेमीले आफ्नी प्रेमिकालाइ फकाउने अचुक उपाय निकालेका छन् र त्यो उपाय हो, आफूलाइ मन पराओस् भनी गरिएको अपहरण र उनको रिहाइ । तर त्यो उपायले उनलाइ जेलको हावा खुवाउने निश्चित भएको छ ।...